motivation – MM File
zawgyi _________ ဝိတ်ချရတတယ်ဆိုတာ အချိန်တွေကုန်၊စိတ်ပင်ပန်း၊လူပင်ပန်းနဲ့ ဝိတ်လျှော့ရတာကြောင့် လူတိုင်းမလုပ်နိုင်တဲ့ ကိစ္စတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အပင်ပန်းခံရသလောက်လည်း ရလဒ်ကတော့ သင့်ကို စိတ်ပျက်စေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဝိတ်ချပြီးနောက်မှာ အရမ်းကို ပြောင်းလဲသွားတဲ့ ပုံစံအသစ်နဲ့ စိတ်ချမ်းသာစရာ ရလဒ်ကို ရရှိခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင် ၅ယောက်ကို ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ 1. Yoo Jaehwan […]
စိတ်ပူပန်ခြင်းကို မိမိ မွေးရက်(၁၂)ရာသီဂြိုလ်ခွင် အလိုက် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနည်းများ
unoicode စိတျလှုပျရှားပူပနျမှုဟာ တဈခြိနျမဟုတျတဈခြိနျမှာ လူတိုငျးနီးပါးတှကွေုံ့ခံစားရတဲ့အရာဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့လူတဈဦးနဲ့တဈဦးစိတျလှုပျရှားမှုကိုကိုငျတှယျပုံခငျြးတော့မတူညီပါဘူး။ အောကျမှာတော့ (၁၂)ရာသီဂွိုလျခှငျအလိုကျ စိတျလှုပျရှားတာကိုကိုငျတှယျနိုငျတဲ့နညျးလမျးတှကေိုဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။ Aries (March 21-April 19) Aries တှဟော စှမျးအငျကုနျခမျးတဲ့အခါ စိတျလှုပျရှားပူပနျတတျကွပါတယျ။ စိတျလှုပျရှားပူပနျတာကို တားဆီးနိုငျဖို့ ကိုယျ့ကိုယျကို အားပွနျဖွညျ့ဖို့လိုအပျပါတယျ။ တမှေးအိပျတာ၊ ကျောဖီသောကျတာနဲ့ အဆာပွစောလေးတှကေိုစားပေးတာက Aries […]
သင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ် ပြောင်းလဲသင့်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သတိပေးနေတဲ့ အချက် (၄) ချက်
Zawgyi version လူတွေကပြောင်းလဲရမှာကို ၀န်လေးကြတယ်။ အထူးသဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်အကိုင်နဲ့ပတ်သတ်ရင် ပြောင်းလဲပစ်ရမှာပိုပြီးဝန်လေးကြပါတယ်။ လူတော်တော်များများဟာ သူတို့မနှစ်သက် ၀ါသနာမပါ တဲ့အလုပ်တွေမှာလုပ်နေကြရတယ်။ ဒါပေမယ့် မမြင်နိုင်တဲ့အခက်အခဲတွေကိုတွေးပြီး ပြောင်းလဲဖို့ဝန်လေးတတ်ကြတယ်။ အောက်ဖော်ပြပါအချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီနေရင်တော့ သင်အလုပ်ပြောင်းဖို့လိုအပ်ကောင်းလိုအပ်နေပါပြီ။ . (၁) ပိုက်ဆံတစ်ခုတည်းအတွက်အလုပ်လုပ်နေရခြင်း —————————————————– ယခုခေတ်မှာ ပိုက်ဆံဟာတော်တော်အရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်လာပါတယ်။ ပိုက်ဆံမရှိရင် စိတ်ဖိစီးမှုတွေဖြစ်လာမယ်၊ ရပ်တည်နိုင်ဖို့ခက်ခဲလာမယ်။ […]
အပြာမင်းသမီးဘ၀ကနေ ရုန်းထနိုင်ခဲ့တဲ့ Shu Qi ရဲ့ အကြောင်း
ထိုင်ဝမ်မင်းသမီး Shu Qi ကတော့ မြန်မာပရိသတ်တွေနဲ့ အထူးမိတ်ဆက်ပေးဖို့ မလိုတဲ့ မင်းသမီးချော တစ်ယော က်ပါ။ထူးခြားတဲ့ ဆွဲဆောင်မှုတစ်မျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အလှပိုင်ရှင်လေးပါ။ နာမည်ကြီး ထိုင်ဝမ်- ဟောင်ကောင် မင်းသမီး မော်ဒယ်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ သူမဟာ ၀င်ငွေအမြင့်ဆုံး မင်းသမီးတွေထဲက တစ်ယောက်ပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီနေ့လို အောင်မြင်တဲ့ […]